जनवरी २०, २०२०
नेपाल र नेपालीका लागि भन्दै आम सदस्य र दाताहरुबाट उठाएको रकमले एन आर एन ए युकेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनको उपहार, हलमा सुरक्षा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भ्रमणमा खर्च, बिभिन्न रेस्टुरेन्टमा खानपिन र जाँडपान लगायतका बिभिन्न खर्च देखाउँदै रकम...
हाम्रा सम्वाददाताबाट गैह्र आवासीय नेपाली संघकी निवर्तमान सचिव जानकी गुरुङले गत अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा सम्पन्न संघ को नवौं विश्व महाधिवेशनमा साधारणसभाबाट अनुमोदित नभएको महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनलाई विशेष साधारणसभा बोलाइ छलफल चलाउन माग गरेकी छन् । उनले...
डिसेम्बर १९, २०१९
एन आए एन एमा धेरैले नसुनेको अर्को काण्डपनि छ । बाँस र जस्ता काण्ड । गोरखाको लाप्राक बस्ति निर्माणमा किनिएको डेढ करोड बराबरको बाँसले अहिले एन आर एनए केन्द्रलाई टाउको दुखाएको छ । गलत निति, बिना ग्रिहकार्य...
गैह्र आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा अनौठो र लाजमदो हर्कद देखिएको छ । शनिवार १० घन्टासम्म चलेको बैठकमा क्षेत्रीय संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य संघको मानमर्दन हुने गरी बैठकमा प्रस्तुत भए । संघका केही केन्द्रीय...
डिसेम्बर १४, २०१९
एन आर एन एको केन्द्रिय सचिवालयको आर्थिक रिपोर्टले अनियमितता देखाएको भन्दै केन्द्रिय नेताहरुलाई आरोप लगाउने धेरै छन् । तर धेरैलाई थाह नभएको तितो सत्य के हो भने एन अर एन युकेको पूर्व कार्य समितिले होटेल अन्नपूर्णमा खाएको...
एन आर एन ए सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक रिपोर्ट नेपालप्लसमा सार्वजनिक भएपछि एन आर एन ए केन्द्रिय सचिवालयको आज विशेष बैठक बस्दै छ । बैठक नेपालको समय अनुसार साँझ आठ बजे बस्ने छ । बैठकमा आर्थिक अनियमितता...
‘नेपालीद्वारा नेपालीकालागि’ नारा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न जाने एन आर एन ए नेताहरुले नेपाल जाँदा कस्तो खाना खान्छन् होला ? सुनको भात ? हिरा र मोती गालेर बनाइएको झोल ? पित्तलै पित्तल कुटेर बनाएको दाल ? कि...
डिसेम्बर १०, २०१९
शेष घलेले आफ्नो कार्यभार हस्तान्तरण गर्दा एन आर एन एलाई ८० करोड छोडेर गएका थिए। अहिले एन आर एन ए सचिवाल १७ करोड घाटामा छ । के यो सामान्य हो ? कसरि कहाँ गयो यो रकम ?...
नोभेम्बर ५, २०१९
(एन आर एन एको केन्द्रिय प्रवक्तामा नियुक्त हुन लागेका डिबी क्षेत्री नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसित, एन आर एन ए केन्द्रिय निर्वाचनका क्रममा) युएई । निकै विवादका बिच सम्पन्न भयो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन ।...